Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka o.y.s.u-ifo oo 6 Xubnood loo doortay
Maamulka o.y.s.u-ifo oo 6 Xubnood loo doortay
Posted by Daljir	/ May 25, 2014
Xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab waxaa kadhacay maanta oo ah Axad(25 May 2014) xaflad balaadhan oo lagu dhisayay gudiga cusub ee OYSU Ifo laguna sagootinayay gudigii hore ee xilka soo hayay muddo 12 bilood ah oo ina dhaaftay.
Shirkan ayaa ahaa shir balaadhan oo ay isugu yimaadeen xubnaha OYSU Ifo iyo xubno kasocday gudiga Faraca Muftaaxul Xoriyo iyo marti sharaf kale.
Ujeedada xafladan ayaa ahayd in lagu dhiso 6 xubnood oo
lashaqayn doona xoghayaha OYSU Ifo oo mudo yar kahor lagu doortay isla xerada Ifo waxaana sidii lafilayay maanta qabsoomay shirkii gudidaas lagu dhisayay.
Xoghayaha OYSU Ifo mudane Bashiir Cabdulaahi ayaa u mahadceliyay gudigii kahoraysay oo wax wayn qabatay wuxuuna
siiraaciyay in uu siiqaadi doono wadadii ay kutaagnaayeen ayna sii dhamaystiri doonaan wixii dhiman isagoo carrab-baabay in ayna howshan culus dhamaanaynin inta laga xoraynayo ciida dhaahirka ah ee Ogadenia wuxuuna xoghayaha OYSU IFO rajo dhaw kamuujiyay xornimada ay higsanayso umada ree Ogadenia.
Xooghayaha ayaa guda galay soo magacaabista gudigii lashaqayn lahaa mudada 12ka bilood ee soosocota hadii alle idmo
wuxuuna soo bandhigay xubno qaali ka ah faraca dhaxdiisa kuwaas oo ay dadkii xaflada magacaabista fadhiyay kuna kalsoon yihiin in ay kasoo baxayaan howsha ay umada u igmatay.
Dhanka kale waxaa goobta kahadlay xubno katirsan gudiga faraca Muftaaxul Xoriya iyo xubna kamid ah marti sharaftii xaflada kasoo qayb gashay waxayna dhamaan umahad celiyeen soo qaban qaabiyayaasha xafladan
quruxda badan waxayna ku dardaarmeen in ay shaqadooda u gutaan sidii loogu doortay xilalkan ay umada uhayaan.